Ujeeddada koowaad ee adeegyada maaraynta kiisaska HIV waa in la hubiyo in macaamiisha ay haystaan ilaha lagama maarmaanka u ah helitaanka iyo ilaalinta caafimaadka deggan.
Kuwa soo socda ayaa loo heli karaa macaamiisha iyada oo loo marayo maareeyayaasha kiiskooda:
taageero mid-mid ah
caawimaadda dalabyada caymiska, guryaha, adeegga bulshada, iyo barnaamijyada xaq u lahaanshaha
caawimaad si wax looga qabto arrimaha sharciga, caafimaadka maskaxda, iyo arrimaha isticmaalka mukhaadaraadka
la talinta yareynta halista si looga hortago faafitaanka HIV
gargaarka degdegga ah ee daryeelka ilkaha, daryeelka indhaha, iyo kharashaadka kale ee caafimaad (tilmaamaha dakhliga iyo daboolka sanadlaha ah)
gargaarka degdegga ah ee kirada, moorgeejka, iyo bixinta biilasha (tilmaamaha dakhliga iyo koofiyad sannadeedka ayaa la adeegsadaa)
kabida kirada (tilmaamaha dakhliga iyo heerarka kirada ayaa lagu dabaqayaa; waqtiga sugida way kaladuwan tahay).
Adeegyada maareynta kiiska waxaa laga heli karaa xafiisyadeena, guryaha macaamiisha, bixiyeyaasha caafimaadka, isbitaalada, guryaha dadka lagu xanaaneeyo, xarumaha dhaqan celinta, iyo meelaha bulshada ku habboon.
Qaar badan oo ka mid ah maareeyayaasheena kiiska ayaa haysta shahaadada Master-ka ee Shaqada Bulshada. Qaar kale waxay leeyihiin waayo-aragnimo u dhiganta sannado la shaqaynta dadka la nool HIV / AIDS. Dhammaan xubnaha shaqaaluhu waxay helaan tababaro xoog leh markay shaqaaleeyaan iyo sii wadida waxbarashada iyo fursadaha horumarinta xirfadeed inta ay kujiraan shaqadooda Frannie Peabody Center.